Letter for parents – Mandalay International Science Academy
July 4, 2021 Wai Yan
Dear MISA family,
Greetings from the MISA administration.
On behalf of the admin team, it is my great pleasure to announce that MISA is ready to commence the 2021-22 Academic Year; and due to the current health and safety issues, the school will be commencing via online. Classes will begin on the 5th of July, coming Monday.
Timetable and Teacher List
The class timetable and list of teachers are attached in this document for your reference. Classes commence at 9:00 am every day; and there isaten-minute break after every class. Please encourage your children to takeabreak from using their screen, walk around, and make use of this time for bathroom use. Following the timetable withoutaschool bell is quite challenging at the beginning, and time-management isaskill that everyone needs to improve. This also isapart of their learning process. We have made the lunch break quite long, so that their eyes can takearest for some time before the afternoon classes start.
Google Meet link for Primary CLasses
For synchronous classes, the following meet link will be used for all classes. Please kindly bookmark the link so that students can easily access it.
2 Jade meet.google.com/xgo-gwwk-dvy
2 Ruby meet.google.com/yrp-npfm-xji
3 Jade meet.google.com/qjw-rtbe-uyp
3 Ruby meet.google.com/dgq-vusz-gqn
4 Jade meet.google.com/uap-krxk-vzk
4 Ruby meet.google.com/ziq-pcqz-tsn
5 Jade meet.google.com/ufp-jkne-gqh
5 Ruby meet.google.com/djg-pcuh-fjj
6 Jade meet.google.com/jvm-zkei-gyy
6 Ruby meet.google.com/rzy-rqof-ypc
Optional Classes and Study Hours
Opt refers to optional classes; due to some concerns raised by parents last year regarding the screen-time, we have made some classes in the afternoon optional. No new lesson will be taught then, and teachers will review what students have recently learned so that they can consolidate the new learning. Although they are optional, we strongly suggest that students take part in those classes as well – unless one has serious health concerns.
Study hours provide good opportunities for students to do their homework under the guidance and supervision of our teachers.
For primary classes, ClassDojo will be used asaLearning Management System (LMS). For those who have already used it last year, there is no need to re-register. Please just accept invitations sent by your teachers. For those who will log-in for the first time, please use the following code. For your information this code expires every 48 hours, and this will therefore expire on Monday afternoon. If you have difficulty getting registered, please contact us.
Year2Jade LNOCZQ
Year2Ruby HIUGNX
Year3Jade JIBDUS
Year3Ruby AJUPXR
Year4Jade FETCPD
Year4Ruby HQQJXU
Year5Jade GOPMQS
Year5Ruby RBAMHB
Year6Jade RZUPPD
Year6Ruby OQHFKX
For secondary classes, Google Classroom will be used asaLearning Management System (LMS). Please accept invitations sent by your teachers. If you have difficulty getting registered, please contact us.
The communication between the school and parents is vital; and we therefore request our parents to contact the persons concerned as needed. These are contact information for your reference. Always feel free to contact us for any concern you have.
Designation Contact Person Contact Email Address Contact Tel. No.
1 Head of Academics Mr. Kyaw Moe Aung kyawmoeaung@bfi-edu.com
for Primary Level, &
Student and Staff Wellbeing Officer Dr. Nelly Myo Tint vpprimarymisa@bfi-edu.com
for Secondary Level Mr. Merdan Nazarov vpsecondarymisa@bfi-edu.com
4 A Levels’ Coordinator Mr. Myo Min Thu Zaw myomin@bfi-edu.com
5 Students’ Welfare Coordinator and
Exams Officer Mr. Shuhrat Abdunazarov shuhrat@bfi-edu.com
6 Hotline Contact for
IT and Technical Issues Mr. Wai Yan Min, waiyan@bfi-edu.com 09955756978
Ms. May Thu Htet maythuhtet@bfi-edu.com
7 School Office Ms. Seng Nang Aung sengnanaung@bfi-edu.com 0943060027
Ms. San Thida Hlaing santhidahlaing@bfi-edu.com 09449260423
8 School Finance Ms. Thwe Thwe Zan thwethwezan@misa.edu.mm 09755838633
9 Student Affairs Ms. Wuttyi Kyaw wuttyikyaw@bfi-edu.com 0943060423
Contact details for Primary Classes
No. Class Name Email Address Tel:
12Jade အတန်းပိုင်ဆရာ Tr. Sara sara.buanani@misa.edu.mm
22Jade လက်ထောက်ဆရာမ Tr. Swan Swan nangswanyeemoemyint@misa.edu.mm 099985395059
32Ruby အတန်းပိုင်ဆရာ Tr. Emma joy.garcia@misa.edu.mm
42Ruby လက်ထောက်ဆရာမ Tr. Thi Thi thithiaungsoe@misa.edu.mm 099986813434
53Jade အတန်းပိုင်ဆရာ Tr. Zar Chi San zarchisan@bfi-edu.com
63Jade လက်ထောက်ဆရာမ Tr. Chit Nyein San chitnyeinsan@misa.edu.mm 099986460571
73Ruby အတန်းပိုင်ဆရာ Tr. Jenny jennytinhla@bfi-edu.com
83Ruby လက်ထောက်ဆရာမ Tr. Nwe Ni Aung nweniaung@misa.edu.mm 099984231966
94Jade အတန်းပိုင်ဆရာ Tr.Zin Mar Aung zinmar@bfi-edu.com
104Jade လက်ထောက်ဆရာမ Tr. Shwe Sin Phoo shwesinphoo@misa.edu.mm 099982139523
114Ruby အတန်းပိုင်ဆရာ Tr. Simon simon.ford@bfi-edu.com
124Ruby လက်ထောက်ဆရာမ Tr. Selena zinmaraung.selena@misa.edu.mm 099988151106
135Jade အတန်းပိုင်ဆရာ Tr. Ramona zinmesuuwai@bfi-edu.com
145Jade လက်ထောက်ဆရာမ Tr. Anna anna@misa.edu.mm 099988151106
155Ruby အတန်းပိုင်ဆရာ Tr. Ogulnur ogulnur@bfi-edu.com
165Ruby လက်ထောက်ဆရာမ Tr. Shwe Sin Naing shwesinnaing@misa.edu.mm 099982058622
176Jade အတန်းပိုင်ဆရာ Tr. Latt Latt lattlatt@bfi-edu.com
186Jade လက်ထောက်ဆရာမ Tr. Ei Nandar einandarmyint@misa.edu.mm 09983186992
196Ruby အတန်းပိုင်ဆရာ Tr. Mileth mileth.igle@bfi-edu.com
206Ruby လက်ထောက်ဆရာမ Tr. May Zin maimayzinthin@misa.edu.mm 09980736102
Contact details for Secondary Classes
217Jade အတန်းပိုင်ဆရာမ Tr. Nelly nellymyo@bfi-edu.com
227Jade လက်ထောက်ဆရာမ Tr. Lea yinminhtet@misa.edu.mm 09449260636
23 8 Jade အတန်းပိုင်ဆရာ Tr. Nicholas nicholas@bfi-edu.com
24 8 Jade လက်ထောက်ဆရာမ Tr. Catherine catherine@misa.edu.mm 09449260633
259Jade အတန်းပိုင်ဆရာ Tr. Shuhrat shuhrat@bfi-edu.com
269Jade လက်ထောက်ဆရာမ Tr. Pan Pan panpanphookyaw@misa.edu.mm 09449260633
279Ruby အတန်းပိုင်ဆရာ Tr. Chris Cortez christophercortez@misa.edu.mm
289Ruby လက်ထောက်ဆရာမ Tr. Myint Thandar myintthandar@misa.edu.mm 09449260427
29 10 Jade အတန်းပိုင်ဆရာ Tr. Begench begench@bfi-edu.com
30 10 Jade လက်ထောက်ဆရာမ Tr. Zin Thandar zinthandar@misa.edu.mm 09449260426
31 10 Ruby အတန်းပိုင်ဆရာ Tr. Jonathan jonathan@bfi-edu.com
32 10 Ruby လက်ထောက်ဆရာမ Tr. Zin Thandar zinthandar@misa.edu.mm 09449260426
33 11 Jade အတန်းပိုင်ဆရာ Tr. Askhad askhad@bfi-edu.com
34 11 Jade လက်ထောက်ဆရာမ Tr. Susanna lailaiayewin@misa.edu.mm 09680740579
For the sake of every individual’s well-being, we would like to request that phone calls to those numbers are to be made from 8:15 am to 5:00 pm on weekdays only. Emails will be replied to in due course.
Occasionally, we make announcements of events and some important information. We would therefore request that you please kindly follow our Facebook Page https://www.facebook.com/mandalayinternationalscienceacademy and beamember of our Facebook Group https://www.facebook.com/groups/357891557998320 .
We wish youaprosperous new academic year ahead.
MISA ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ MISA ကျောင်းရဲ့ ၂၀၂၁- ၂၂ ပညာသင်နှစ် စတင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်း ကြေညာအပ်ပါတယ်။
လက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ လုံခြုံရေးအခြေအနေများကြောင့် အတန်းများကို Online မှပဲ သင်ယူနိုင်ဖို့ စီစဥ်ထားပါတယ်။ အတန်းများကို လာမည့် တနင်္လာနေ့ ၊ ဇူလိုင် (၅) ရက် နေ့မှာ စတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အတန်းအချိန်ဇယား နှင့် သင်ကြားမည့် ဆရာများစာရင်း
အတန်းအချိန်ဇယား နှင့် သင်ကြားမည့် ဆရာများစာရင်းကို မိဘများကြည့်ရှုနိုင်ရန် စာအောက်တွင် ပူးတွဲပေးပို့ထားပါတယ်။ အတန်းများကို နေ့စဥ် နံနက် ၉ နာရီမှာ စတင်မှာ ဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်ပြီးတိုင်းမှာ နားချိန် ၁၀ မိနစ်စီ ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို ၁၀ မိနစ်ဟာ ကျောင်းသားများ မျက်စိအနားပေးကာ အညောင်းအညာ ဖြေနိုင်ရန် စီစဥ်ပေးထားတာဖြစ်လို့ မိဘများအနေဖြင့် ကျောင်းသားများကို ကွန်ပျူတာရှေ့မှ ခွာကာ အညောင်းပြေ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ သန့်စင်ခန်းသွားခြင်း၊ စိမ်းလန်းသော သစ်ပင်များကို ကြည့်စေခြင်းစသည်တို့ ပြုလုပ်ရန် တိုက်တွန်းပေးဖို့ အကြံပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပုံမှန် ကျောင်းဖွင့်ချိန်များလို ကျောင်းတက်/ဆင်း ခေါင်းလောင်းသံမရှိဘဲ အတန်းတက်ရခြင်းဟာ အစပိုင်းမှာတော့ ခက်ခဲကောင်း ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု Time management skill ဆိုတာ ကျောင်းသားတိုင်း တတ်မြောက်ကျွမ်းကျင်ရမယ့် အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထမင်းစားကျောင်းဆင်းချိန်ကိုတော့ အချိန်လုံလောက်စွာ ပေးထားတာမို့ နေ့လည်ကျောင်းမတက်မီအထိ ကျောင်းသားများ မျက်စိအနားပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Time table ထဲက Opt class ဆိုသည်မှာ Optional classes များကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ Screen-time နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယခင်နှစ်က မိဘများရဲ့ အကြံပြုချက်များအရ နေ့လည်ပိုင်းအတန်းများကို မတက်လိုက မတက်ဘဲ နေနိုင်တဲ့ Optional class များအဖြစ် စီစဥ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီOptional class တွေမှာ သင်ခန်းအသစ်များကို သင်ကြားမည်မဟုတ်ဘဲ သင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ သင်ခန်းစာများကိုသာ ပြန်လည် လေ့ကျင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျောင်းသားများကို သင်ခန်းစာ ပိုမိုပိုင်နိုင်စေမှာ ဖြစ်သလို သင်ခန်းစာအသစ်သင်ကြားရာမှာလည်း အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ လိုအပ်သူများကလွဲလို့ ကျန်ကျောင်းသား များကို Optional class ဆိုသော်လည်း တက်ရောက်ဖို့အတွက် အပြည့်အဝ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ကျောင်းက စီစဥ်ပေးထားတဲ့ Study hours ဆိုတာ ကျောင်းသားများက မိမိတို့အိမ်စာများကို ဆရာ/မများရဲ့ လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်မှုအောက်မှာ ပြုလုပ်နိုင်မည့် တစ်ခုတည်းသော အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာနှင့်ကျောင်းသားများ တစ်ပြိုင်နက်သင်ကြားကြတဲ့ synchronous classes တွေအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ Meet link များကို အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိဘများအနေဖြင့် ထို Meet link များကို Bookmark ပြုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ဒါမှ ကျောင်းသား/သူများ အတန်းဝင်ရောက်ရာမှာ လွယ်ကူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မူလတန်းအတွက် Class Dojo ကို Learning Management System (LMS) တစ်ခုအနေဖြင့် အသုံးပြုသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတွက် ယခင်နှစ်က အွန်လိုင်း အတန်း တက်ရောက်ဖူးသူ ကျောင်းသား များအနေဖြင့် register ထပ်မံပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ။ ဘာသာရပ်ဆရာ/မများရဲ့ Invitation များကိုသာ Accept လုပ်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး Login ဝင်ရမည့်သူများအနေဖြင့် အောက်မှာပေးထားသော သက်ဆိုင်ရာအတန်း Class code များရိုက်ကာ ဝင်ရောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ပြပါ Class code များဟာ ၄၈ နာရီအကြာမှာ တစ်ကြိမ်ပြောင်းလဲတာဖြစ်လို့ တနင်္လာ ညနေပိုင်းဆိုရင် အသစ်သွားပြောင်းမှာဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။ Register လုပ်ရာမှာ အခက်အခဲရှိရင် ကျောင်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Secondary class များအတွက် Google Classroom ကို Learning Management System (LMS) တစ်ခုအနေဖြင့် အသုံးပြုသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရပ်ဆရာ/မများရဲ့ Invitation များကိုသာ Accept လုပ်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ Register လုပ်ရာမှာ အခက်အခဲရှိရင် ကျောင်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်နိုင်သည့် ဖုန်း နှင့် email လိပ်စာများ
ကျောင်းနဲ့ မိဘများရဲ့ ဆက်သွယ်မှုဟာ ပဓာနကျတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိဘများဆက်သွယ်နိုင်ရန် mail များ ဖုန်းနံပါတ်များကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီကို ဘာအကြောင်းအရာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ရာထူးတာဝန် ဆက်သွယ်ရမည့်သူ ဆက်သွယ်ရန် Email လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်
1 Head of Academics ဦး‌ကျော်မိုးအောင် kyawmoeaung@bfi-edu.com
ဒုတိယကျောင်းအုပ် Dr. နယ်လီမျိုးတင့် vpprimarymisa@bfi-edu.com
ဒုတိယကျောင်းအုပ် Mr. Merdan Nazarov vpsecondarymisa@bfi-edu.com
4 A Levels သင်တန်းမှူး ဆရာ မျိုးမင်းသူဇော် myomin@bfi-edu.com
5 Students’ Welfare Coordinator and Exams Officer
Mr. Shuhrat Abdunazarov shuhrat@bfi-edu.com
အခက်အခဲများအတွက် ဦးဝေယံမင်း waiyan@bfi-edu.com 09955756978
7 ကျောင်းရုံးခန်း Ms. Seng Nang Aung sengnanaung@bfi-edu.com 0943060027
Ms. စန်းသီတာ santhidahlaing@bfi-edu.com 09449260423
ဘဏ္ဍာရေးရာ Ms. သွယ်သွယ်ဇံ thwethwezan@misa.edu.mm 09755838633
9 ကျောင်းသားရေးရာ Ms. ဝတ်ရည်ကျော် wuttyikyaw@bfi-edu.com 0943060423
22Jade As. Tr. Tr. Swan Swan nangswanyeemoemyint@misa.edu.mm 099985395059
124Ruby လက်ထောက်ဆရာမ Tr. Selena zinmaraung.selena@misa.edu.mm 099983689001
206Ruby လက်ထောက်ဆရာမ Tr. May Zin maimayzinthin@misa.edu.mm 099980736102
217Jade အတန်းပိုင်ဆရာ Tr. Nelly nellymyo@bfi-edu.com
ဖုန်းခေါ်ဆိုရာမှာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေစေရေးအတွက် မနက် ၈း၁၅ မှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီ အတွင်း (ကျောင်းဖွင့်ရက်များသာ) ခေါ်ဆိုပါရန် တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Email များကို အချိန်မီ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ဖြေကြားပေးပါမယ်။
ကျောင်းရဲ့ Facebook Group and Page
အရေးကြီးပွဲအခမ်းအနားများနဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကို ကျောင်းရဲ့ Facebook page မှာ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ကြေငြာပေးသွားမှာ ဖြစ်လို့ MISA Facebook Page ကို Follow လုပ်ပေးထားပါခင်ဗျာ။ Group မှာလည်း Join ထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Facebook Page https://www.facebook.com/mandalayinternationalscienceacademy
Facebook Group https://www.facebook.com/groups/357891557998320 .
အောင်မြင်ဖွယ်ရာ စာသင်နှစ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ